Akwụkwọ ndekọ aha - Ndị na - eweta ya na ndị na - emepụta ya - Alietc B2B
Ma ị na-azụ ngwaahịa ma ọ bụ nke eji arụ ọrụ, esonye na Ọhịa ahịa dijitalụ Alietc naanị ike ịdị mma maka azụmaahịa. Ma ị ahia na ngwongwo ndị ahịa dị ka ụmụaka, uwe or kichin, ma ọ bụ jiri ya rụọ ọrụ dịka akụrụngwa dịka bauxite na akpu, site na akwa na plastik.
na Ahịa ahịa B2B, ndị na-ebubata ngwaahịa nwere ihe niche pụrụ iche na nke ahụ n'adịghị emepụta ndị naanị na-ere ngwaahịa ha, ma ọ bụ ndị na-azụ ahịa, ndị na-azụ ngwaahịa naanị. ndị na-eweta ọrụ mee ha abuo, nke putara na oburu na ibu onye ahia, Alietc bara uru karia ahia gi.
Ọ Theụ ịre ahia na Alietc bụ na ọ bụrụ na inwere ngwaahịa ị ga-ere, anyị ga - enyere gị aka ịchọta ezigbo ndị ahịa, nke ị ga - atụ anya ịmalite mmekọrịta na - adịte aka na nke ga-aba uru. Ebumnuche anyị bụ ime otu ihe ahụ maka ngwaahịa ị na-achọ ịzụ. Anyị Ngwugwu B2B emeela nke ọma iji hụ na ị ga-egbo mkpa gị niile dịka onye na-azụ ahịa ma ọ bụ ndị na-ere ahịa.
Iji mee nke a, anyị ga-enye gị ngwaọrụ niile ịchọrọ n'aka nke aka gị ma nye gị ọtụtụ nduzi na ndụmọdụ. Ma ị bu ezigbo onye ahia ma ọ bụ bụrụla ugbu a n'ụwa na-arụ ọrụ dị ka onye na-eweta ngwaahịa, anyị na-akwado gị ka ị gụpụta 'Ndị na - enye Ndị Na - enye Ihe Efu' anyị na Alietc.
Ozugbo ị debanyere aka na Alietc, ị ga - enwe ike ịmepụta profaịlụ gị.
Biko were obere oge iji mepụta profaịlụ anya na-ele anya ga-amasị ndị ahịa ma ọ bụ ndị ahịa nwere ike - anyị ekepụtala Akwụkwọ Ndụmọdụ bara uru na Creatmepụta profaịlụ Alietc nke naanị ndị otu nọ. Na ntuziaka ndị ọzọ bara uru nke ukwuu, njikwa ihe okike gị ga - enyere gị aka ịzọdo ụkwụ wee mee ka ị ghara imebi oge na-adịghị mkpa.
Bido ịzụ ma ọ bụ ree!
Ka anyị bido n’ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na inwere ngwaahịa maka ọrịre
Ugbu a, nke a bụ ihe ịkwesịrị ịme ma ọ bụrụ na ịnwe ndepụta ngwaahịa ịchọrọ ịzụ.
Dị ka onye na-azụ ahịa:
Nzọụkwụ mbụ gị bụ ịchọ ngwaahịa ndị ịchọrọ ịzụ na, dị ka ihe dị mkpa, maka ndị nrụpụta na ndị na-eweta ngwaahịa ndị ahụ
Nyefee rịọ maka ịzụta ngwaahịa. Can nwere ike iji igwe nchọta dị ike ịchọta ndị na-emepụta ma ọ bụ ndị na-eweta ngwaahịa (s) nke ị na-achọ ma nyefee "arịrịọ ịzụta ngwaahịa"
Mee oghere. Can nwere ike itinye bidị na ngwaahịa ọ bụla edepụtara maka ọrịre na ikpo okwu Alietc
Nyefee arịrịọ arịrịọ. Can nwere ike itinye arịrịọ ngwaahịa, nke ị na-eme ka o doo anya ihe ngwaahịa (s) ị na-achọ ịzụta na ihe ị dị njikere ịkwụ ụgwọ maka ya (ha) - ndị na-eweta ngwaahịa / ndị nrụpụta ọ bụla nwere ike ịnye ngwaahịa (ngwaahịa) gị na-achọ ga-enweta amamịghe ozugbo nke arịrịọ ngwaahịa gị wee mechaa kpọtụrụ ma ọ bụrụ na ọnụahịa ị na-achọ ịkwụ ụgwọ nwere mmasị na ha.
Initialzọ izizi gị maka ndị nrụpụta / ndị na-eweta ngwaahịa ọ bụla ga-esite na Alietc ka anyị wee nwee ike ịlele ndenye arịrịọ gị. Ozugbo anyị nwere obi ụtọ na ị bụ ezigbo azụmahịa ma ọ bụ onye ọzọ, mgbe ahụ, a ga-enyefe ndị na-eme ya / onye na-eweta ngwaahịa gị arịrịọ gị yana nkọwa kọntaktị gị, site na mgbe ahụ gaa n'ihu ị nwere ike ịmekọrịta ibe gị.
Lee na Alietc otu ihe anyị mụrụ n'oge na mbụ bụ na ọnụahịa kacha mma na-abụkarị n'ihi mkparịta ụka. Nke a bụ ọkachasị ebe enwere nnuku oke ma ọ bụ ikike ịdị na-eme iwu ugboro ugboro. E nwere ọtụtụ ihe dị mkpa ọ dị mkpa itinye n’uche banyere nkwekọrịta izu ụka.
Dị ka onye na-ere ere:
Nzọụkwụ mbụ gị bụ ịdepụta ngwaahịa ndị ị nwere ire ma kpọọ rịọ sitere n’aka ndị zụrụ ahịa ma nwee ike. Inwere ike depụta ngwaahịa ndị ahụ na ọnụahịa azụtara ma ọ bụrụ na ị họrọ.
Nke abuo, inwere ike ichota ihe di iche-iche anyi nwere ndi choro i zuta ahia nke inwere, ma obu ndi zutara ha, ma obu ahia ndi ozo. Nwere ike zigara ha ọnụahịa nke ị nwere ike ịnye ngwaahịa (s) ha na-achọ.
Alietc - Ego riri nne karịa ahịa ahịa dijitalụ